Shina namboarina manokana Mpanamboatra sy mpamatsy | ZHJ
SHZHJ dia mamokatra karazana fifandraisana sy profil manokana namboarina ho an'ny fampiharana isan-karazany. Azontsika atao ny manatanteraka ny ankamaroan'ny fepetra takiana amin'ny rafitra angovo avo lenta sy propulsion. Na ho an'ny EMD, GE na ALCO anao na ny kamiao anao, dia mila mpamatsy azo antoka ianao, SHZHJ no safidy tsara indrindra ho anao sy ny orinasanao.
SHZHJ dia mamokatra karazana fifandraisana sy profil manokana namboarina ho an'ny fampiharana isan-karazany. Azontsika atao ny manatanteraka ny ankamaroan'ny fepetra takiana amin'ny rafitra angovo avo lenta sy propulsion. Na ho an'ny EMD, GE na ALCO anao, na ny kamiao mpitrandraka anao, dia mila a mpamatsy azo itokisana, SHZHJ no safidy tsara indrindra ho anao sy ny orinasanao.
Ny fifandraisanay dia mahafeno ny fenitra OEM ary azo namboarina mifanaraka amin'ny filanao manokana. Ho an'ny ampahany amin'ny vidin'ny OEM dia afaka manana vokatra mety amin'ny fotoana mety ianao. Mijanona amin'ny teti-bola ary aza mijanona mandritra ny herinandro vao hahazo ny fifandraisana. Mifandraisa aminay amin'ny teny nindramina izao!
Ny fahafaham-po feno amin'ny takian'ny mpanjifa dia lahasa laharam-pahamehana ho an'ny Vondron'orinasa SHZHJ. Ny famokarana profil araka ny sary tsirairay dia ahafahan'ny mpanjifantsika mahatsapa ireo tetikasa sy fotokevitra sarotra indrindra. Ny R&D sy ny fifehezana kalitao ary ny serivisy dia ahafahantsika mandray ny toetra mampiavaka ny toetr'andro sy ny teknolojia amin'ny tetikasa rehetra.
Ny mombamomba ny fifehezana mombamomba vaovao dia midika asa fikarohana sy fampandrosoana (asa R&D), ao anatin'izany ny fanomanana antontan-taratasy famolavolana, fanamboarana fitaovana (maty na andiana maty), fitrandrahana profil ary famolavolana farany, famokarana santionany preproduction.
Ny fe-potoana misy eo amin'ny fanaovan-tsonia fifanarahana R&D sy ny fandefasana santionany amin'ny famokarana dia matetika 3 herinandro. Fepetran'ny fandefasana mombamomba aorian'ny fanekena ny santionany: tsy tokony hihoatra ny 3-4 herinandro aorian'ny fametrahana ny lamina.
Manana atrikasa manokana izahay, ary tena manintona izy rehetra.
Diniho ny takian'ny mpanjifa amin'ny vidin'ny teknolojia, ny kalitaon'ny vokatra sy ny serivisy tsara ary ezaho ny hifandray amin'ny mpanjifa.
Previous: CONTACT CONTACT TRANO
Manaraka: Rivet amin'ny fifandraisana